Ngano dzeRoma, kubva pahwaro hwayo kusvika kuma medieval nguva | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | tsika nemagariro, Roma
Ngano dzeRoma dzine midzi yavo mukubva chaiko mavambo eiyo Guta Risingagumi. Sezvauri kuziva, hwaro hwaro hune nhoroondo inoshamisa shure kwayo, iyo ye Romulus naRemus. Asi, pamusoro pezvo, guta rine nhoroondo yakawandisa rinofanira kugarisa dzimwe dzakawanda ngano nyaya dzaunofarira kuziva.
Hatizokwanise kukuudza zvese, asi isu tinogona kukuvimbisa kuti iyo nyaya dzatiri kuzokuudza iwe chikamu chenyaya dzakakosha kwazvo dzeRoma uye kuti uchafarira kuzviziva. Kwete zvemahara zvine nyaya dzine hukama ne kutanga madzimambo, ne madzimambo makuru kubva panguva yechinyakare uye nerima Middle Ages yeguta rakanaka reItaly (pano tinokusiya chinyorwa nezvezvivakwa zvacho). Asi, pasina kumwe kunonoka, ngatiendei nenyaya dzakanakisa dzengano nezve Guta Rekusingaperi.
1 Ngano dzeRoma, kubvira pakavambwa guta
1.1 Nhoroondo yekutangwa kweRoma
1.2 Kubatwa kweVakadzi veSabine, Imwe Yakakurumbira Ngano yeRoma
1.3 Mukoto weMazamurelli
1.4 Castel Sant'Angelo, chiitiko chenhoroondo zhinji dzeRoma
1.5 Iyo Passetto di Borgo
1.6 Chitsuwa cheTiber
Ngano dzeRoma, kubvira pakavambwa guta
Sezvatakakuudza, mavambo chaiwo eRoma ane nhoroondo yekufungidzira. Asi ndozvinoitawo chikamu chakakurumbira che kubiwa kwemasabines, nekuda kweiyo guta rekare reRoma rakakura muusiku hwenguva. Ngatiendei nazvo zvese.
Nhoroondo yekutangwa kweRoma
Romulus naRemus vachiyamwa nere-mhumhi
Iwo mavambo engano eRoma anotangira muzana ramakore rechisere BC. Nekudaro, iyi ngano yeRoma inotanga kunyangwe pakutanga. Ascanio, mwanakomana wa Eniasi, iro gamba reTrojan, rakavakirwa pamabhangi eTiber guta re Alba Longa.
Makore mazhinji gare gare, mambo weguta iri akadaidzwa Kuverenga Nemukoma wake Amulium akamubvisa pachigaro. Asi mhosva yake haina kumira ipapo. Kuti wekutanga asazove nemwana aigona kutora chigaro, akamanikidza mwanasikana wake, Rea Silvia, kuti ave Vestal, izvo zvaida kuti arambe ari mhandara. Zvisinei, akaipa Amulio haana kufunga kuda mwari Marte.
Uyu akapa Rea nhumbu kubva kumapatya Romulus naRemus. Nekudaro, pavakazvarwa, nekutya kuti mambo akaipa angavauraya, vakaiswa mubhasikiti ndokusiiwa muRwizi rweTiber pacharo. Dengu rakamonerera pasi pedyo negungwa, padyo nezvikomo zvinomwe, kwaraionekwa na mhumhi. Akanunura nekuyamwisa vana mudura rake re Gomo rePalatine kudzamara vawanikwa nemufudzi, uyo akaenda navo kumba kwake, uko kwavakakurerwa nemukadzi wake.
Sevanhu vakuru, majaya maviri aya akabva abvisa chigaro cheAmulio ndokutsiva Numitor. Asi chinonyanya kukosha kwatiri nhoroondo yedu ndechekuti Romulus naRemus vakavambawo koloni yeAlba Longa kumahombekombe erwizi irwo pacharo, chaizvo uko shewolf rakanga ravayamwa, uye vatungamiriri vavo vakaziviswa.
Nekudaro, gakava pamusoro penzvimbo chaiyo iyo guta idzva raizogadzirirwa rakatungamira mukukakavara kunosuruvarisa pakati pevaviri kwaizopera Remo kufa pamaoko ehama yake chaiye. Maererano nengano, Romulus akabva ava mambo wekutanga weRoma. Kana tichizoteerera kune vezvakaitika kare, raive gore ra754 BC.
Kubatwa kweVakadzi veSabine, Imwe Yakakurumbira Ngano yeRoma
Kubatwa Kwevakadzi veSabine
Zvakare kune iyo nguva yaRomulus ndeye nyaya yekubiwa kwevakadzi veSabine, imwe yengano dzinozivikanwa dzeRoma. Zvinonzi muvambi weguta akagamuchira chero munhu kubva kuLazio semugari mutsva kuti awane vanhu.
Zvakadaro, vaive vese varume, izvo zvakaita kuti kukura kweRoma kutadze. Romulus akabva aona vanasikana vemasabata, aigara pachikomo chaipo chaJehovha Quirinal akasimuka kuti avabate.
Kuti aite izvi, akaita mutambo mukuru uye akakoka vavakidzani vake. Apo maSabine akakatyamadzwa newaini, akatapa vanasikana vavo ndokuenda navo kuRoma. Asi nyaya haipere ipapo.
Panguva iyi, akange asiya mutungamiri weguta Tarpeia, uyo aidanana naMambo weLatinos. Sezvo ivo vaive vazivisa kurwa neRoma mushure mekupambwa kwevanasikana vavo, musikana uyu akaita chibvumirano namambo kuti achamuratidza mukova wokupinda muguta muchivande kana akamupa zvaaive nazvo muruoko rwake rweruboshwe mukutsinhana. Akanga achitaura nezvechishongo chegoridhe, asi, apo maSabine aiziva mukana uyu wakavanzika kuenda kuRoma, mambo akaraira mauto ake kuti apwanye Tarpeii nenhoo dzavo, dzakatakurwa chaizvo pamaoko ake ekuruboshwe.
Nekudaro, kupera kwenyaya iyi kune mumwe musiyano. Inotaura kuti vaRoma, vachiziva nezve kutengeswa kwemukadzi mudiki, vakamukanda padombo iro, chaizvo kubvira ipapo, rainzi Tarpeya dombo.
Pakupedzisira, pakanga paine kupokana pakati peSabines nemaRoma. Kana pane kudaro, hazvina kuitika nekuti vasikana vakatorwa yakamira pakati pemauto maviri kumisa kurwa. Kana maRoma akakunda, vaizorasikirwa nevabereki nehama, nepo kana maSabine akadaro, vaizosara vasina varume. Nekudaro, rugare rwakasainwa pakati pemaguta maviri aya.
Mazzamurelli Street, chiitiko cheimwe yenyaya dzeRoma
Kana iwe ukashanyira iyo Trastevere Roman, iwe uchawana mugwagwa mudiki uyo, kutanga kubva chechi yeSt Chrysogonus, inosvika kumusoro iyo yeSan Gallicano. Mukoto uyu ndewe iye Mazamurelli. Asi ndivanaani zvisikwa izvi kunyange zvine mugwagwa muRoma unonzi mazita avo?
Tinogona kuvazivisa pamwe nevana vadiki ava njere dzakashata izvo zviri chikamu chengano dzese dzenyika. Vaizove mhando yemakoko anofarira kuita zvidiki zvidiki kune vanopfuura-uye, zvokwadi, avo vanogara mumugwagwa iwoyo.
Muchokwadi, imwe yenyaya dzinoumba iyi ngano inoti paigara murume aive aine mukurumbira sen'anga yekuona zvisikwa zvemweya unoshamisa. Imba yemunhu uyu ichiri kuchengetedzwa munzira uye inonzi iri haunted.
Nekudaro, hazvisi zvese zvakaipa zvakakomberedza mazzamurelli. Kune vamwe vatauri veiyi ngano yeRoma, zvisikwa zvinobatsira izvo zvakazvipira kuchengetedza vavakidzani vemugwagwa une zita ravo.
Castel Sant'Angelo, chiitiko chenhoroondo zhinji dzeRoma
Kunze kwekuve chimwe chezvivakwa zvakakosha kwazvo muEternal City, iyo Castel Sant'Angelo ine ngano zhinji. Yakavakwa kuve Mausoleum yaMambo Hadrian, ane makore anoda kusvika zviuru zviviri enhoroondo. Izvo hazvikushamise iwe, nekudaro, kuti kwave kuri chiitiko chenyaya zhinji ngano.
Inonyanya kufarirwa ndeye chikonzero chezita rayo. Isu tiri mugore re590 yenguva yedu. Denda rinoparadza denda rakanga rawira Roma napapa Gregory Mukuru akaronga mudungwe. Ichisvika panhare, yakaonekwa pamusoro payo ngirozi huru kuti aive mumaoko ake munondo wekuzivisa kupera kwedenda.
Naizvozvo, kwete chete nhare inonzi de Sant'Angelo, asi pamusoro pezvo, chimiro chemutumwa mukuru chakavakwa pamusoro payo kuti, mushure mekudzoserwa kwakawanda, uchiri kuona nhasi.
Iyo Passetto di Borgo
Passetto di Borgo, chimwe chezviitiko zvengano zhinji dzeRoma
Hatiendi kure nekuvakwa kwekutanga kuti tinowana imwe yemapoinzi eRoma azere nengano uye nengano nyaya. mabvazuva passetto kana nzira yakakomberedzwa inobatana, chaizvo, nhare yeSant'Angelo pamwe ne Vatican.
Iyo ingangoita hafu mamaira, asi chave chiri chiitiko chemarudzi ese e yakabuda mbatatisi nevamwe vafundisi vakatsvaga kuhwanda munguva dzehondo nekupamba. Nekudaro, iyo ngano inoti chero munhu anoyambuka kanokwana makumi manomwe achaona magumo avo ese matambudziko.
Saka zvine mukurumbira inyaya yepasipoti yaBorgo iyo yakaonekwa mumafirimu akati wandei, nhepfenyuro yeterevhizheni uye kunyange mitambo yemavhidhiyo.
Isu tinopedzisa kushanya kwedu kwengano dzeRoma pachitsuwa ichi, icho chauchiri kuona nhasi pakati peTiber. Yakaumbwa kunge chikepe uye haina kureba 270 metres uye 70 upamhi. Asizve, yanga iri nyaya yenyaya dzengano kubvira panguva dzekare.
Muchokwadi, ivo vanokanganisa iwo maitiro avo. Zvinonzi mambo wekupedzisira weRoma, Tarquinio iyo Yakanyanya, akakandwa murwizi nevamwe vake vagari vemo. Aive ari munhu akashata aitoba gorosi ravo. Nguva pfupi mushure mechiitiko ichi, chitsuwa chakatanga kuoneka uye vaRoma vakafunga kuti chakatangira nekuda kwenzvimbo dzakaunganidzwa dzakakomberedza mutumbi wamambo, chikamu chakanaka chaive, chaizvo, gorosi raakange aba.
Kune zvese izvi, iyo Tiberina yaigara ichidyara kutya pakati pevagari vemuRoma. Izvi zvakagara kwemazana emakore akati wandei kusvika, panguva yehosha yedenda, a nyoka (mucherechedzo wemushonga) wakapedza chirwere. Sekutenda, maRoma akavaka tembere mukuremekedza Aesculapius pachitsuwa uye vakamira kutya kushanyira icho. Tinokuyeuchidza kuti uyu mufananidzo aive mwari weRoma wekurapa.
Mukupedzisa, takakuudza zvimwe zvevakakurumbira ngano dzeroma. Nekudaro, guta rekare seichi rinofanira kuve nemamwe akawanda. Pakati peavo vakasara vari mupombi uye pamwe isu tichazokuudza mune imwe chinyorwa pane iyo inoreva Emperor Nero uye Basilica yeSanta Maria del Pueblo, Imwe yeiyo Dioscuri Castor naPollux, iyo ye Muromo weChokwadi kana iwo mazhinji ane protagonist Hercules.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Cities » Roma » Ngano dzeRoma